Volo Ny vy manitsy mahamay Nano dia mampifangaro ireo fitaovana misy coating nano-seramika miaraka amin'ny teknolojia vy ratsy mahomby, izay mitondra volo malefaka sy ho tsara endrika haingana. Misaotra ny tsindrona magnetika eo an-tampon'ny satroka sy vatana, mihodina mandeha ho azy ny fitaovana rehefa mihidy ny cap, izay azo antoka hitondra azy. Ny vatana mihetsika miaraka amin'ny famoronana USB tsy afaka rechargeable dia mora mitahiry ao anaty kitapo ary mitondra, manampy ireo vehivavy hihazona taovolony kanto amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza. Ny tetika loko fotsy-mavokely dia mampindrana ilay fitaovana ho toetran'ny vehivavy.
Asabotsy 11 Septambra 2021
Ny Shaver Ny andiany alpà dia mpanamory vita amin'ny semi-proffesional izay afaka mitantana asa fototra ho an'ny fikarakarana tarehy. Vokatra iray ihany koa izay manome vahaolana ho an'ny fidiovana miaraka amin'ny fomba fiasa maoderina miaraka amin'ny aesthetics tsara tarehy. Ny fahatsorana, ny minimalism sy ny fiasa mifangaro amin'ny fifaneraseran'ny mpampiasa mora dia manorina ny fototry ny tetikasa. Ny fanandramana mpampiasa fifaliana dia fanalahidy. Ireo toro-hevitra dia azo alaina mora foana amin'ny mpanao volo ary apetraka ao amin'ny faritra fitahirizana. Ny Dock dia natao hanomezana alalana ny mpanodina sy manadio ireo toro-hevitra tohanan'ny UV Light ao amin'ny faritra fitahirizana.
Fitaovana Maro Ny Portable Fitaovana
Alakamisy 9 Septambra 2021
Fitaovana Maro Ny Portable Fitaovana Ny tetikasa dia manome traikefa velona azo zahana ho an'ny vahoaka ivelany, izay mizara roa amin'ny fizarana roa: ny tena vatana sy ny maodely izay azo ovaina.Ny vatana voalohany dia misy fiampangana, borosy sy fikosoham-borona. ny fitaomam-panahy ho an'ny vokatra dia avy amin'ny olona tia mandehandeha ary manana fonosana na very ny entany, ka ny fonosana azo tsapain-tanana sy ny versatile lasa vokatra dia ny toerana. Betsaka ny olona te handeha, noho izany dia lasa safidy ny vokatra portable. Ity vokatra ity dia mifanaraka amin'ny fangatahan'ny tsena.
Alarobia 8 Septambra 2021
Talata 7 Septambra 2021
Fitaovana Ny Xtreme Lip-Shaper® System no fitaovana fanamafisana azo avy amin'ny klinika azo antoka voalohany eto an-tany. Mampiasa fomba fiasa «kapoaka» Shinoa efa 3 500 taona - raha lazaina amin'ny teny hafa, mitsoka - ampiarahina amin'ny teknolojia avo-molotra handroso sy hanitatra ny molotra eo no ho eo. Ny famolavolana dia miteraka molotra tokana sy avo roa sosona toy ny Angelina Jolie. Ireo mpampiasa dia afaka manatsara ny molotra ambony na ambany. Namboarina ihany koa ny famolavolana mba hampiakarana ny arche amin'ny tsipìka Cupid, feno ny lavaka molotra hanandratra ny zoro amin'ny vavan'ny fahanterana. Mety amin'ireo lehilahy roa ireo.
FinaMill Ny Lakozia Matanjaka Ao An-Dakozia Asabotsy 18 Septambra
Catzz Fandriana Saka Zoma 17 Septambra
Perception Cafe Alakamisy 16 Septambra
Volo Ny Boaty Sakafo Antoandro Ny Shaver Fitaovana Maro Ny Portable Fitaovana Fandriana Saka Fitaovana